Gaalkacyo: Masaajidka Salaaxu-diin oo la weeraray iyo mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay magaalada. – Radio Daljir
Abriil 17, 2011 12:00 b 0
Gaalkacyo, April 16 – Inta la hubo hal qof ayaa ku dhintay siddeed kale oo dhaawac ahna waxa la geeyay Isbitaalka guud ee magaalda kadib markii caawa maqribkii weerar lagu ekeeyay masaajidka Salaaxu-diin ee xaafadda Garsoon iyada oo galabtana magaalada ay ka dhaceen dibad-baxyo rabshado wata.
Tiro aan la hubin ayaa dhimasahda ka dhigaysa saddex, qaarna waaba ay ka sii badinayaan. Lama yaqaan jihada qaaday weerarka, balse waxan shaki ku jirin in ay xiriir la leedahay dilkii maanta duhurkii la dilay Sheekh ismaaciil Xaashi Xuseen oo ahaa agaasimihii wasaaradda caddaaladda iyo awqaafta Puntland isla markaana ahaa waacid aad looga yaqaanno Puntland.
Dhinaca kalena dad bannaabxayaal oo ka caraysan dilkii loo gaystay alle ha u naxariistee agaasimihii aw-qaafta ee wasaradda caddaaladda iyo arrimaha diinta Puntland Sh Ismaaciil Xaashi Xuseen ayaa galabta oo Sabti ah iskugu soo baxay waddooyinka magaalada Galkacyo.
Bannaanbaxayaasha oo ahaa boqolaal qof oo u badan haween iyo carruur ayaa xiray waddooyinka magaalada gaar ahaan waddada laamiga ah ee dhaxmarta bartamaha magaalada, waxaana ay dhagxaan iyo dhalooyin ka buuxiyeen jidadka kala duwan ee magaalada, meelana waxayna ku gubeen taayirro.
Goobaha bannaanbaxayaashu ay hortooda xirteen kuna iftiimayeen damacooda iyo dareenka ay qabaan waxaa ka mid ahaa xarumaha dawladda sida xarunta maamulka gobolka, sadhigga ciidanka bileyska iyo sidoo kale xarunta qaybta bileyska ee gobolka Mudug, halkaasi oo ay dhigeen dhaxgaan iyo dhalooyin, ayna ka weeciyeen gaadiidkii hormari-jiray waddoyinka ku xeeran.
Dadka bannaabaxa astagada ah dhigayey ayaa ku dhawaaqayey hal ku dhigyo ay ku diidan yihiin falalka ammaan darro ee lagu ugaarsanayo wax ku oolka bulshada Galkacyo, uuna ugu danbeeyey dilkii alle ha u naxariistee Sh Ismaaciil Xaashi Xuseen oo maanta duhurkii qarax miino lagu dilay.
Dibad-baxayaasha oo laga dareemayey caro xooggan oo ka dhalatay dilalka aan dhammaadka lahayn ee magaalada Galkacyo ayaa si weyn u dhaliilay wax-qabadka dawladda ee gobolka Mudug gaar ahaanna magaalada Galkacyo iyagoo sheegay dawladdu in ay ka gaabisay gacan ku dhiggidda danbiilayaasha iyo amniga guud ee gobolkaba.
Ciidamada amniga oo isku dayey meelaha qaar in ay hor-istaagaan dibad-baxayaasha caraysan ayaa ku guul-darraystay hakinta ama joojinta bannaanbaxa, waxaana la arkayey mudaharaadayaasha oo meelkasta ka taagan xarumaha dawladda inkasta oo aysan wax dhibaato ah gaysan.
Isku soo baxaan galabta ee dadweynaha magaalada Galkacyo ayaa ka dhashay caro xooggan oo harsatay dadka magaalada Galkacyo kaddib markii siyaabo kala duwan oo dhammaantood gaadmo ah lagu dilay dad badan oo miisaan-weyn ku dhax-lahaa gobolka, kuwaasi oo aan illaa iyo haatan si rasmi ah loo aqoonsan cidda dilalkooda ka danbaysay.
Sikastaba ha ahaatee waa markii ugu horraysay oo dadweynaha magaalada Galkacyo ay ka gilgishaan dilalka joogta ah iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Galkacyo iyo sidoo kale amniga sii xumaanaya, waxaana laga yaabaa tani in ay soo dadajiyo tallaabo lagu adkaynayo nabad-galyada oo laga hirgaliyo Galkacyo
Wararka ugu dambeeya magaalada Gaalkacyo iyo xaaladdeeda kala soco radiodaljir.com
Baahin: Sabti, Apr 16, Weriye Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Sh. Ismaaciil X. Xuseen oo lagu dilay magaalada Galkacyo; mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay masjidka Salaax al diin; Duqa magaalada Galkacyo ayaan ka waraysanay … Mudaaharaad lagu taageeray natiijada shirkii Nairobi oo ka dhacay Bossaso; qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha ayaa waraysanay … Nimcaan Brian William Bowden, nin dhallinyar oo hooyadi Somali tahay, u dhashay Britain, oo ku tabaalaysan Hargeysa; Nimcaan ayaan waraysanay … Warbixin ku saabsan safar hawleedkii wafti ka socda Puntland oo kormeeray dhulka ay abaaruhu saameeyeen ee gobollada Karkaar & Nugaal …
on Wasiiru dawlaha Qorshaynta & Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland Prof. C/Qadir C. Xaashi oo la kulmaya qurbajoogta Puntland ee Minnesota, 3-da July.Falis123[email protected]